MANJA Zaza bobo iray nalain’ny dahalo an-keriny
Mirongatra ny fakana an-keriny ireo zaza varira na bobo any amin’ny faritra Atsimo Andrefana.
Zazalahy kely iray varira niara-natory tamin-drenibeny indray no nalaina dahalo efa-dahy an-keriny tao an-tokantranony ny alin’ny 27 hifoha ny 28 febroary teo tao amin’ny fokontany Fenoarivo, distrikan’i Manja. Basy no nentin’ireo jiolahy niditra ny trano tamin’ny 10 ora alina ka nambanany avy hatrany ilay renibeny izay niambina ankizy marobe teo akaikiny. Lasany vokatr’izany ity zazalahy kely varira ity ary tsy mbola hita hatramin’ny fotoana nanoratanay. Raikitra ny fanarahan-dia nataon’ny fokonolona ka olona roa no notifirin’ireo dahalo ary naratra mafy toy ny anadahin-drenin’ilay zaza sy fianakaviana akaiky hafa. Mbola eo am-pitadiavana ilay zaza nalaina an-keriny ity sy ireo mpanao ratsy moa ny mpitandro ny filaminana koa andrasana izay mety ho tohiny. Tsiahivina fa ny voamason’ireo ankizy varira no tena tadiavin’ireo dahalo.